संघीयताको अराजक कुराले कमजोर बनेको प्रदेश « Sthaniya Khabar
संघीयताको अराजक कुराले कमजोर बनेको प्रदेश
प्रकाशित मिति : २० माघ २०७४, शनिबार ११:५९
अहिले मुख्यमन्त्रीकाे दौडमा रहेका एक नेताले केही महिनाअघि धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, “संविधानसभामा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्दा प्रदेशलाई यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो भन्न थाल्यो । सबै तल दिने भएपछि किन प्रदेशलाई ? लौ खा ! भनेर सबै अधिकार स्थानीय तहमै हुर्र्‍याइदियाैं ।”
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा पनि अधिकार ‘फ्लाई’ भएर स्थानीय तहमा पुगेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । कुरा के भने जतिसुकै तामझामले बैठक राखे पनि, मुख्यमन्त्री छाने पनि संविधानले दिएको अधिकार र कर्तव्यका हिसाबले प्रदेशको भुमिका चियापत्ति छान्ने जालीजस्तो मात्रै छ । न चिया खन्याउने भाँडोको हैसियतमा छ, न चिया थाप्ने गिलासको हैसियतमा छ । प्रदेश मात्र चियापत्तिको छोक्रा छान्ने जालीको हैसियतमा छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक संसद भवन भव्य होला ! तर अधिकार र जिम्मेवारी टहरोमा चलिरहेको स्थानीय तहसँग छ । भव्य कार्यालय, महँगा गाडीको उपभोग गर्ने प्रदेशिक पदाधिकारीहरूको तुलनामा चौतारा वा गौंडाको पेटीमा बसेर काम गर्ने वडा अध्यक्षसँग जिम्मेवारी धेरै छ ।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार र जिम्मेवारी दयनीय छ । करको दायरा सिमित छ । राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आयको अवस्था झनै दयनीय छ । प्रादेशिक सरकार कसको बन्यो र मुख्यमन्त्री को बन्यो भन्ने कुरा ठूलो होइन । संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी कति छ भन्ने कुरा ठूलो हो । संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी थोरै छ । प्रादेशिक शासनको अभ्यासका क्रममा केही समयपछि नै यो अभाव खड्किने निश्चित छ ।
यसो भन्दैमा प्रदेश कमजोर भएको कुरा जायज हो भन्ने पनि होइन । स्रोतको सिमितता, सामाजिक तथा भौगोलिक विविधताका कारण नेपालको संघीयता सहकार्य, सहशासन, सहअस्थित्वका आधारमा चल्नु पर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नेपाली संघीयताका ‘टायर’हरू हुन् । यीमध्ये कुनै टायर कमजोर भयो भने संघीयताको अभ्यास खल्बलिन्छ ।
संघीयता आफैंमा बृहद अर्थ बोकेको व्यवस्था हो । तर नेपालमा ‘संघीयता भनेकै प्रदेश, प्रदेश भनेकै संघीयता’ भन्ने संर्कीण आमबुझाई छ । संघीयता बिरोधीले पनि प्रदेशलाई राष्ट्रको सत्रुका रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । अहिले प्रदेश सभाहरू बस्दैछ । प्रदेश सभा बसेपछि संघीयता लागु भएको भनेर जान्नेसुन्ने भनिएकाहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारले गरिरहेका कामचाँही संघीय व्यवस्थामा पर्दैन जसरी टिप्पणी गरिरहेका छन्, यो अतिवादी टिप्पणी हो ।
हो, प्रादेशिक संरचनाविना संघीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यसो त केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारविना पनि संघीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्न । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई कम आँकेर जुन व्याख्या बिश्लेषण भइरहेको छ, त्यो टाउको र खुट्टा विनाको मान्छेको परिकल्पना गरेजस्तै हो ।
जनजाति र मधेसीका मुद्दा बोक्नेको अराजक कुरा
जनजाति र मधेसीका मुद्दालाई अघि सारेर संघीयताको माग गर्नेहरूले आफ्नो समुदाय अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीय व्यवस्थाको माग गरेकै होइन । उनीहरूको पृष्ठभूमी हेर्दा आफू सिंहदरबारमा स्थापित हुन नसक्ने देखिए पछि प्रदेशसम्म अधिकार लैजाने र त्यहाँ स्थापित हुने स्वार्थ देखिन्छ ।
खासगरि कांग्रेस र कम्युनिष्टको राजनीतिबाट ढेपिएर किनारा पुगेकाहरूले जनजाति र मधेसीको मुद्दालाई लिएर संघीयताकाे माग गरे । अझ संघीयतालाई जातीय र क्षेत्रीय रङ दलेर अझै सबैको ध्यान खिचाउने प्रयत्नमा लागे । उनीहरू नागरिक अधिकारसम्पन्न होस् भन्नेभन्दा पनि आफू बलियो हुन चहान्थे ।
स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न भए आफ्नो तजबिजी चल्दैन भन्नेमा उनीहरू सचेत थिए । प्रदेशले जादुको छडीले जसरी जातीय, भाषिक, लैंगिक समस्याहरू हल गर्छ भन्ने चर्चा गरे । प्रदेशलाई नायक, केन्द्र सरकारलाई खलनायक बनाएर अतिरञ्जित तरिकाले व्याख्या गरे । स्थानीय तहलाई नोकरको दर्जामा पनि राखेन ।
यतिसम्म कि प्रदेशलाई बहुराष्ट्रको पुलिन्दा भिराएर राष्ट्रियतालाई चुनौति दिने उत्ताउला र अराजक व्याख्याहरू पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूप्रति असहमत राजनीतिक दलहरू प्रदेशप्रति अनुदार बन्दै गए । संविधान लेखनमा त्यही अनुदार दलहरूकाे बाहुल्य भएकै कारण प्रदेश कमजाेर भयाे ।
मधेसी र जनजातिको मुद्दालाई लिएर संघीयताको माग गर्नेहरू स्थानीय सरकारप्रति अनुदार छन् । उनीहरूले स्थानीय तह प्रदेशमातहत हुनु पर्छ भनेर हाकाहाकी भन्दै आएका छन् । जनजाति र मधेसीको मुद्दा बोकेर संघीयताको माग गर्नेहरूसँग केन्द्रीकृत व्यवस्थाको दाह्रा नङ्ग्रा प्रदेशसम्म बिस्तार गर्ने र त्यसको नायकत्व आफूले लिने स्वार्थ थियो । यति डरलाग्दो स्वार्थ बोकेकाहरूले जनता अधिकारसम्पन्न होस् भनेर संघीयताको माग गरेका थिए भनेर कुनै हालतमा भन्न सकिन्न ।
प्रदेशलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर संघीय व्यवस्थाको माग गर्ने अर्को जबरजस्त शक्ति थियो, तत्कालिन बिद्रोही माओवादी । माओवादीले पनि नागरिक अधिकारसम्पन्न होस् भनेर संघीयताको माग गरेकै थिएन । माओवादीका लागी जनतामा फैलिन आर्कषक मुद्दाको आवश्यकता थियो ।
जनजिविका, बहुदलीय स्वतन्त्रताजस्ता मुद्दाहरू कांग्रेस र एमालेले पञ्चायत बिरुद्ध लड्दा प्रयोग भइसकेका थिए । फेरी त्यही मुद्दा लिएर हतियार उठाउँदा जनताले पत्याउने अवस्था थिएन । त्यसैले संघीय व्यवस्था माओवादीको मुख्य मुद्दाका रुपमा स्थापित भयो । होइन भने हतियार बोकेको शास्त्रीय कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य मुद्दा संघीयता कसरी भयो ? यति बिरोधाभाषपूर्ण छ कि सर्बहारा अधिनायकवाद, जनवादी केन्द्रीयतालाई मूलमन्त्र मान्ने पार्टीले संघीयतालाई कसरी स्वीकार्यो ?
संघीयताले मात्रै नपुगेर माओवादीले त्यसलाई जातीयकरण ग-यो । कालन्तरमा माओवादीजस्तो कम्युनिष्ट पार्टी जातीय महासंघजस्तो देखिन पुग्यो । राम कार्कीजस्ता माओवादीको बैचारिक नेताले पनि याे कुरा स्वीकार्दै अाएका छन् । २०५२ सालमा माओवादीले बर्ग संर्घष, जनजिविकाजस्ता मुद्दालाई अघि सरेर जनयुद्ध घोषणा ग-यो, तर ती मुद्दामा जनताको खासै आर्कषण देखिएन ।
२०५४ सालपछि माओवादीले जातीय मुक्तिमोर्चाहरू गठन ग-यो । जातीय मुक्तिमोर्चाहरूको राजनीतिक सिद्धान्तले पनि प्रदेशलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्यो । जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गरे जातीय मुक्ति हुने अचम्मको सपना देखाइयो, त्यसमा जनतालाइ अाकर्षित पार्न एकहदसम्म माओवादी सफल पनि भए । तर माओवादीको सहमतिमा जारी भएकाे अन्तरिम संविधानमा संघीयता लेखिएन । संविधानमा संघीयता मधेस आन्दोलन पछि मात्रै लेखियो । माओवादी पनि संघीयताप्रति इमान्दार थिएनन् भन्ने कुरा यसैले पुष्टी गर्छ ।
अनुदार कांग्रेस र एमाले हाबी
प्रदेशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संघीयताको कुरा गर्दा संविधान लेखन प्रक्रिया नै गिजोलियो । प्रदेशको संख्या र सिमानामा सहमति नहुँदा पहिलो संविधानसभा भंग भयो । संघीयता भनेकै प्रदेश, प्रदेश भनेकै संघीयता भन्ने मानसिकता त्यसबेला अझ बलशाली बन्यो । दोस्रो संविधानसभामा संघीयताप्रति अनुदार मानिने कांग्रेस र एमाले शक्तिशाली दलका रुपमा उदायो ।
घिसारिएरै भएपनि संघीयता स्वीकारेको कांग्रेस र एमालेको बुझाई पनि ‘संघीयता भनेकै प्रदेश, प्रदेश भनेकै संघीयता’ भन्ने छ । यो बुझाईका कारण संघीयताप्रति अनुदार कांग्रेस एमालेको तारो प्रदेश बन्यो । तल अधिकार दिँदै नदिने, दिनै परे स्थानीय तहलाई नै दिउँ भन्नेहरू संविधान लेखन प्रक्रियामा हाबी हुँदा प्रदेश कमजोर बन्यो ।
मधेसी र जनजातिको मुद्दा बोक्नेहरूले प्रदेशलाई उत्ताउलाे तरिकाले ब्याख्या गरे । तर संविधान लेखन प्रक्रियामा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर भइदियो । उनीहरूको अतिरञ्जित कुराबाट बिच्किएका कांग्रेस र एमालेको उपस्थिति भने शसक्त थियो । त्यस कारण संवैधानिक अधिकारका हिसाबले प्रदेश कमजोर भयो ।
संबैधानिक रुपमा प्रदेश कति कमजोर बन्यो भन्ने कुरा शासकीय अभ्यासका क्रममा अझ बढी स्पष्ट हुँदै जानेछ । प्रदेश सभाको बैठक सुरू हुन थालेको छ । बिस्तारै प्रदेश सरकारहरू गठन हुँदैछ । अब व्यवहारिक रुपमै अभाव महशुस हुँदै जानेछन् । अहिले पनि प्रदेशको आर्थिक र राजनीतिक अधिकार पनि संकुचित छ । पछि अभ्यासका क्रममा अभाव देखिँदै जानेछन् ।
अधिकारका लागी प्रदेशले के गर्ने ? मधेसी र जनजातिको मुद्दा बोकेर संघीयताको वकालत गर्नेहरूले जसरी केन्द्रलाई खलपात्र बनाएर सम्भव छैन । स्थानीय तहले पाएको अधिकार प्रदेशमा खिच्न खोज्नु अर्को महाभूल हुनेछ । किनकी नागरिकको नजिकको राज्यको निकाय भनेको स्थानीय तह हो । त्यसैले स्थानीय तहमा गइसकेको अधिकार प्रदेशमा ल्याउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ । स्थानीय तहमा गइसकेको अधिकार प्रदेशमा ल्याउन खोज्ने दलका लागी लगत्तै आउने चुनाव महँगो सावित हुनेछ ।
हुन त, प्रदेश सरकारहरूले पूर्णता पाएपछि आफूले पाउनु पर्ने कति अधिकार केन्द्रमा छन् र कति स्थानीय तहमा ‘फ्लाई’ भएका छन् भनेर अध्ययन गर्लान् ! माग्लान् पनि । तर संविधानले स्थानीय तहलाई जति अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसको अनुपातमा जनशक्ति र स्रोत साधन दिए यो अधिकार बढी होइन । कार्यबोझ अनुसार स्रोत साधन नदिने हो भने स्थानीय शासन असफल हुनेछ ।
स्थानीय शासन असफल भए केन्द्र र प्रदेश पनि असफल हुन्छ । किनकी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शासन गर्ने भूगोल र नागरिक एउटै हो । एउटा असफल भए सबै असफल हुन्छन् । एउटै भुगोलमा शासन गर्ने, तर अ–आफ्नै तरिकाले चल्छु भनेर सम्भव छैन । त्यसैले नेपालको संघीयता सहकार्य, समन्वय र सहशासनमा आधारित छ भनिएको हो ।
स्थानीय तह कार्यान्वयन भयो, निर्वाचित जनप्रतिनिधी पनि बहाल भइसक्यो । तर सँस्थागत भएको छैन । अहिले स्थानीय तहले यसअघि कहिल्यै नगरिएको शासकीय अभ्यास गरिरहेको छ । त्यसैले पनि अलमलको अवस्थामा छ । हुन त प्रादेशिक अभ्यास पनि नयाँ नै हो । प्रभावशाली नेता र कार्यकर्ता निर्वाचित भएका कारण प्रदेशिक शासकीय अभ्यास स्थानीय शासनको तुलनामा सहज हुनेछ ।
नयाँ अभ्यासका कारण अल्मलिएको स्थानीय तहलाई प्रदेशहरूले समन्वय गर्न सक्छन् । आफ्नो प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरू मात्र होइन वडा–वडाबीच पनि तालमेल हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहका लागी बनाउनु पर्ने प्रान्तीय नीतिहरू तर्जुमा गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । सबै काम आफैंले गर्न खोज्नु नै हाम्रो मुख्य समस्या हो ।
स्थानीय तहले गर्न सक्ने काममा प्रदेश र केन्द्रले हात हालेर समय बर्बाद पार्न हुन्न । स्थानीय तहले आफ्नो विकास र समृद्धिका लागी काम गर्छ । प्रदेशले प्रादेशिक विकास कसरी गर्ने भनेर काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले पाएको जिम्मेवारीमा प्रदेश सहयोगी मात्र होइन, निर्णयक भूमिका खेल्न सक्छ । अन्तरवडाको विकास तथा सेवाप्रवाह स्थानीय तहले नै व्यवस्थित गर्न सक्छन् । तर अन्तरस्थानीय तहबीचको विकास, समृद्धिका लागी प्रदेशले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
स्थानीय तहलाई विनियोजन भएको बजेट प्रदेश सञ्चित कोषबाट विनियोजन नहुँदा असन्तुष्ट हुनुभन्दा संघीय सरकारले बजेट किन ढिलाई ग-यो भन्नेमा चनाखो रहनु उत्तम हुन्छ । किनकी, स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवाप्रवाह सुस्त भए त्यसले प्रदेशलाई पनि समस्यामा पार्छ । किनकी शासन गर्ने भूगोल एउटै हो । स्थानीय तहलाई अहिलेको जस्तै भद्रगोल अवस्थामा राखेर समृद्ध प्रादेशिक शासनको कल्पना गर्न सकिन्न । स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम प्रदेशले गर्न खोजेर पनि समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
संघीयता पक्षधर भनिएकाहरूले संघीयताको औचित्यलाई अ-आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट अनुसार असाध्यै क्लिष्ट तरिकाले ब्याख्या गरे । संघीयता किन चाहिन्छ भन्ने कुरा सरल छ । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राजनीतिक व्यवस्था मध्येको एक संघीयता हो । केन्द्रीकृत र एकात्मक शासनले भन्दा संघीयताले राज्य निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढी गराउँछ । यसपाली सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनले यही कुरालाई पुष्टी गर्छ ।
संघीयता बारेको धेरै भ्रम अझै हटिसकेको छैन । आफूले भनेको मात्रै संघीयता हुने र अरूको फरक धारणालाई संघीयता बिरोधी ठान्ने प्रवृत्तिले घाटा संघीयतालाई नै हो । आफूअनुकुल व्याख्या गरेर अतिवादी धारणा बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नै पर्छ ।
लेखक तामाङ विगत ७ बर्षदेखि स्थानीय विकास बीटकाे पत्रकारितामा कार्यरत छन् ।